Iindaba -Iindawo ezintathu zomgangatho, amanqaku asixhenxe wofakelo, uninzi lwabantu aluzihoyi ezi nkcukacha zofakelo lomgangatho!
Bekusoloko kukho intetho kwishishini le-flooring elithi i-flooring yeplanga "yindawo yomgangatho omathathu kunye nofakelo lwamanqaku asixhenxe", oko kukuthi, ingaba ufakelo lulungile okanye alumiseli i-70% yomgangatho womgangatho. Ukusetyenziswa okungonelisiyo komgangatho ubukhulu becala kubangelwe ngumgangatho ophakamileyo wendlu.
Ke ngoko, ukuze umgangatho wenziwe ube mtsha njengentsha, awuchazwanga kuphela kumgangatho kunye nomgangatho womgangatho, kodwa kwanofakelo oluchanekileyo nolondolozo olululo. Namhlanje siza kujonga kwiinkcukacha zomgangatho wendlu!
Ukulungiselela ukugcina kufuneka kubekhona
Uvavanyo olubanzi lwendawo evulekileyo ngaphambi kokuba kuvulwe isitshixo, esisikhonkco esibalulekileyo sokuqinisekisa umgangatho wepheyiji.
Ukukhawuleza akwanelanga. Umgangatho ubekwe ngaphandle kovavanyo olubanzi lokusingqongileyo, oluthambekele kwiingxaki ezisemgangathweni. Ngaphambi kokuba uvule, yenza la manqaku asi-7 kwaye uqalise ukuhambisa.
Okokuqala, linganisa umxholo wamanzi aphantsi komhlaba
Sebenzisa imitha yokuqulatha ukufuma ukulinganisa ubumanzi bomhlaba, umgangatho oqhelekileyo womhlaba uyi- <20%, kwaye umgangatho wofakelo lomhlaba yi <10%.
Umxholo wamanzi womgangatho ogangathiweyo uphezulu kakhulu, kwaye umgangatho utsala amanzi kwaye uyanda, ekulula ukubangela iingxaki njengokugoba, ukubetha, kunye nengxolo. Ukuchithwa kwezixhobo kuyimfuneko ngeli xesha ukunqanda iingxaki kusetyenziso olulandelayo.
Okwesibini, ukongeza kwimigangatho ye-SPC, imigangatho yeplanga kufuneka ihlolwe ukuba ayithethi
Imingxunya yembovane yeedike ezingamawakawaka iwile, kwaye iintubi ziyingozi enkulu. Umsebenzi wokujonga kunye wokuthintela kufuneka wenziwe ngaphambi kofakelo, kungenjalo kuya kuba semva kakhulu xa zifunyenwe.
Okwesithathu, jonga ubucayi bomhlaba
Ukuba isicaba somhlaba asikho kumgangatho osemgangathweni, kulula ukubangela iingxaki ezinje ngokuqhekeka komphetho, ukujija, ukugoba, nengxolo. Umsebenzi wokulinganisa kufuneka wenziwe ngaphambi kokuba kugangathwe.
Sisebenzisa umbusi oxhomeke kwiimitha ezimbini kwimilinganiselo yekhaphethi. Ukuba kukho umsantsa ongaphezulu kwe-3 mm okanye i-5 mm phantsi kwerula, oko kuthetha ukuba umhlaba awulingani kwaye ugqithile kwiimfuno zepavingi zemigangatho yomthi.
Okwesine, jonga ukuba umhlaba womelele na
Ukuba umhlaba awomelelanga ngokwaneleyo, ungawuqabula uthuthu ngeenyawo zakho. Le yinto esihlala siyithetha. Le nto iyacaphukisa kakhulu emva kokufaka umgangatho. Nokuba ucoca njani iikona, uya kugcina uthuli phantsi.
Abantu abahamba phantsi bakhupha uxinzelelo kwaye babangela ukuba lonke uthuthu luvele kumalungu adibeneyo kunye neekona. Oku kubangelwe kukusilela kokulungiswa kwengingqi xa umhlaba wawudanjiswa.
Ukuba kukho imingxunya okanye izinto zokuxobuka, kuya kufuneka uphathe umhlaba kwakhona, kungenjalo iya kubuchaphazela ngokulula ubomi benkonzo esemgangathweni.
Okwesihlanu, kunqande imisebenzi yokuxubana
Inkqubo yokupaka phantsi kufuneka yenziwe emva kokugqitywa nokwamkelwa ngokuchanekileyo kweprojekthi efihliweyo yomhlaba, iprojekthi yesilingi, iprojekthi yodonga, kunye neprojekthi yamanzi nombane. Ukuba ukusebenza komnqamlezo kulula ukwenza umonakalo kumgangatho, ukuba iprojekthi yodonga ayigqitywanga, igrabile ewayo iya kubangela uthuli kunye nokukrwela. Iingxaki ezinje ngomonakalo phantsi, neengxaki ezinje ngokutshiza ipeyinti kunye nokugquma phantsi nokonakalisa ubuhle bomgangatho.
Ukongeza, ukuba kukho iingxaki emsebenzini oxubeneyo, uxanduva olungacacanga luya kuchaphazela ukukhuselwa kwamalungelo.
Okwesithandathu, uthethwano olufihliweyo lobunjineli kunye nokumakisha
Phambi kokuqala ulwakhiwo, umnini kufuneka abonise indawo ekuyo iprojekthi efihliweyo kwaye enze uphawu olubonakalayo ukunqanda ukonakala kweepayipi zamanzi ezifakiweyo, imibhobho yomoya, iintambo zombane kunye neendlela zonxibelelwano ngexesha lokwakha, kunye nokuthintela ukonakaliswa kwesibini komhombiso.
Eyesixhenxe, ingaba amanyathelo manzi akhoyo (umgangatho we-SPC akufuneki ujonge amanyathelo angangeni manzi)
Umgangatho woyika amanzi. Emva kokungena kwamanzi, iya kuba neengxaki ezinjenge-blistering, degumming kunye ne-deformation, eyenza ukuba ingasebenziseki. Ke ngoko, kuya kufuneka ujonge amanyathelo angangeni manzi ngaphambi kokuba uphewule kwaye kukho ukuvuza kwamanzi endlwini. Ukuba kukho imeko enjalo, kufuneka inyangwe ngaphambi kokubeka phantsi.
Isibhozo, umhombiso sisiganeko esikhulu. Ukushiya into encinci kunokukhokelela kwimicimbi ephambili. Xa wonke umntu ethenga umgangatho omhle kwaye elindele ukufakwa, ungalibali umsebenzi wokuqala. Amalungiselelo okuqala enziwe kakuhle kwaye indlu intofontofo.
Iivenkile eziqhelekileyo zemigangatho zineenkosi zazo zokufaka, eziya kuthi zifumane uqeqesho olumanyeneyo ngaphambi kokuthatha umsebenzi, ke ezi zinto zinokuphetshwa.
Ukuba uthenga umgangatho ngokwakho kwaye uqeshe isifaki ngokwahlukeneyo, kuya kufuneka ukhumbule la manqaku, kwaye uthathe amanyathelo kwangaphambili ukuthintela inkathazo enkulu ~